कक्षा ११ र १२ का सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाइ आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना ! – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठशिक्षा/स्वास्थकक्षा ११ र १२ का सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाइ आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
Madan | Sunday September 13, 2020	Comments
२७ भदौ, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका कारण परीक्षा रोकिएको बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुको विवरण संकलन गर्ने भएको छ । बोर्डले परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरू महामारीका कारण अध्ययनरत विद्यालय भन्दा फरक जिल्ला वा स्थानमा बसिरहेका छन् वा छैनन भन्ने विवरण संकलन गर्न लागेको हो । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
कोभिड-१९ का कारण यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हुन सकेन भने कक्षा ११ को वाषिर्क परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिने भएको छ । तर शिक्षा ऐन अनुसार कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्न नमिल्ने भएको हुनाले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा लिने तयारी भईरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यो विवरण संकलन भइसकेपछि परीक्षाको होम सेन्टरबारे पनि निर्णय हुन्छ ।’